Saldhigga Ciidamada Jabuuti ee degmada Buula Burde oo Weerar xooggan lakulmay.
Tuesday September 03, 2019 - 11:17:46 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xoogaga Al Shabaab ayaa markale guluf dagaaleed hor leh ku qaaday ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti ee ku sugan gobolka Hiiraan bartamaha dalka Soomaaliya.
Iska hor'imaadyo xooggan ayaa lagasoo sheegayaa degmada Buula Burde oo ah degmada labaad ee ugu weyn gobolka Hiiraan, dagaalka oo dhacay xalay saqdii dhexe ayaa yimid kadib markii xoogaga Al Shabaab ay dhowr jiho ka weerareen saldhigga ciidamada Jabuuti.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen hugunka rasaasta iyo daryanka madaafiicda ay labada dhinac is dhaafsanayeen, saldhigga lagu weeraray ciidamada Jabuuti ayaa kaabiga ku haya magaalada Buula Burde.
Illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin taliska ciidamada AMISOM oo ku saabsan dagaalladii cuslaa ee xalay ka dhacay gobolka Hiiraan, shalay ayay aheyd markii weerar ka dhacay duleedka degmada Jalalaqsi ay Al Shabaab ku dishay 5 askari.